La-qabsashada Finland | LSSRY
La-qabsasho (kotoutuminen) waxaa loola jeedaa in aad saldhigto Finland islamarkaasna aad barato qaabkii aad ugu dhex noolaan laheyd bulshada Finnishka ah. La-qabsashada waxaa sare u qaada tusaale ahaan barashada luqada, helitaanka shaqo ama waxbarasho iyo xiriirada bulshada Finnishka ah.
Marka aad u soo guurto Finland waxaad heli kartaa adeegyada sare u qaada la-qabsashada. Haddii xubnaha qoyskaadu ay Finland kuula soo guuraan waxay iyaguna xaq yeelan karaan adeegyada la-qabsashada tusaale ahaan Qiimeynta bilowga ah (alkukartoitus), qorsheynta la-qabsashada (kotoutumissuunnitelma) iyo waxbarashada la qabsashada (kotoutumiskoulutus).
Adeegyada sare u qaada la-qasashada
Warbixin aasaasi ah oo ku saabsan Finland
Dhamaan dadka dalka u soo guuray waxay xaq u leeyihiin in ay helaan macluumaad aasaasi ah oo ku saabsan Finland. Marka aad hesho fasaxa dal ku joogista ama aad diiwaangeliso xuquuqdaada joogitaanka dalka waxaad sidoo kale heleysaa warbixin qoraal ah oo ku saabsan.
bulshada Finnishka iyo nolosho shaqada,
xuquuqdaada iyo waajibaadkaada iyo sidoo kale
adeegyada adiga kaa caawinaya la-qabsashadada.
La-talinta dadka dalka u soo guuray
Xafiiska shaqada (työ- ja elinkeinotoimisto) iyo degmooyinka waxaa jooga la-taliyayaal kaa caawinaya la-qabsashada Finland. La-taliyayaashaas waxaad ka heleysaa macluumaad la xiriira tusaale ahaan.
la-qabsashada iyo adeegyada la xiriira
tababarada iyo waxbarashada
Qiimeynta bilowga ah (alkukartoitus)
Qiimeynta bilowga ah waxaa looga dan leeyahay qiimeynta adeegyada aad u baahan tahay si sare loogu qaado la-qabshadaada. Qiimeynta bilowga ah tusaale ahaan waxaa lagu hubsanayaa aqoontaad, waaya-aragnimadaada shaqo iyo aqoontaada luqadeed. Qiimeynta bilowga ah waxaa lagu sameeyaa xafiiska shaqada (työ- ja elinkeinotoimisto) ama xafiiska sooshalka (sosiaalitoimisto). Qiimeynta waxaa sidoo kale lagu sameyn karaa meelo kale, tusaale ahaan qeybta waxbarashada. Tani waxay ku xiran tahay sida qiimeynta bilowga hore looga qabanqaabiyay degmada aad deggan tahay.
Qiimeynta bilowga ah waxaa loo sameeyaa qofka dalka u soo guuray ee:
xafiiska shaqada uga diiwaangashan shaqo doon ahaan (työnhakija) ama
qaata lacagta nolosha (toimeentulotuki) ama
iskiis u dalbada qiimeynta bilowga ah
Sameynta qiimeynta bilowga ah waxaad ka codsan kartaa tusaale ahaan xafiiska shaqada iyo dhaqaalaha ama xafiiska sooshaalka ee degmadaada. La-taliyayaasha dadka dalka u soo guuray ayaad ka heleysaa warar dheeraad ah oo ku saabsan qiimeynta bilowga ah iyo qabanqaabadiisa ee degmadaada.
Qorshaha la-qabsashada (kotoutumissuunnitelma)
Haddii aad caawimaad ugu baahan tahay la-qabsashada waxaa laguu sameynayaa qiimeynta bilowga ah kadib qorshaha la-qabashada. Qorshaha la-qabsashada waxaa markasta loo sameyaa qofka dalka u soo guuray ee
shaqo la’aan shaqo doona ah ama
qaata lacagta nolosha ama
ka yar 18 sano, Finlandina aysan u joogin qof ka mas’uul ah
Qorshaha la-qabsashada waa qorsheynta waxqabadyada sare u qaadaya la-qabsashadaada. Qorshaha la-qabsashada waxaa ka mid noqon kara tusaale ahaan, barashada luqada Finnishka, waxbarashooyin kale ama tababar shaqo. Qorshaha la-qabsashada waxaa lala sameeyaa la-taliyaha xoogga shaqada ee xafiiska shaqada ama shaqaalaha sooshaalka ee xafiiska sooshaalka.
Qorshaha la-qabsashada waa in la sameeyaa ugu dambeyn saddex sano kadib marka aad qaadato sharciga joogista ogolaanshada ee dalka ama aad diiwaangashato xuquuqda joogistaada dalka. Waqtiga qorshaha la-qabsashadu wuxuu ku xiran yahay inta aad kaalmo ugu baahan tahay la-qabsashada. Sida caadiga ah ugu badnaan qorshaha la-qabsashadu wuxuu qaadan karaa saddex sano. Dhacdooyinka qaar wuxuu noqon karaa shan sano.
Marka qorshaha la-qabsashada la dejiyo waxaa ku saaran waajib ah inaad qorshahaas u hogaansanto kana qeybqaadato waxqabadyada qorshaha ku jira ee lagu heshiiyay. Saraakiisha dowladda waxaa ku waajib ah inay waxqabadyadaas kuu soo keenaan. Xafiiska shaqada ama degmada ayaa la soconaya sida uu u hirgalay qorshuhu. Marka aad ka qeybqaadato waxqadyada lagu heshiiyay ee qorshaha la-qabsashada ku jira waxaad Kelada (Kela) ama degmada ka heli kartaa kaalmada la-qabsashada.
Haddii aad heysato shaqo waxaa suurtagal kuu ah inaad caawimaad uga hesho la-qabsashadaada shaqada qofka ku siiyay. Qofka aad u shaqeyso wuxuu tusaale ahaan kaa bixin karaa qarashka kooraska luqada Finnishka. Qofka aad u shaqeyso wuxuu mararka qaar kaa caawin karaa waxyaabaha ay ka midka yihiin helitaanka guri. Weydii arrintan qofka aad u shaqeyso.
Waxbarashada la-qabsashada (kotoutumiskoulutus)
Marka la sameeyo qorshaha la-qabsashada waxaad heli kartaa waxbarashada la-qabsashada. Waxbarashada la-qabsashada waxaa qabanqaabiya degmooyinka, xafiiska shaqada iyo machadyo badan. Waxbarashada la-qabsashada waxaa ku jira sida caadiga ah barashada luqada Finnishka ama Iswidishka, iyo barashada dhaqanka, nolosha shaqada iyo bulshada Finnishka ah.
Muhiimada luuqadda Finnish-ka
Maxaan u baranayaa Finnishka?
Afka Finnishka waxaa ku hadla oo uu luqadooda hooyo yahay qiyaastii 90 % dadka Finnishka ah. Afka Iswidishka waxaa ku hadla oo uu luqadooda hooyo u yahay qiyaastii 5 % dadka Finnishka ah.
Inta badan waxaa haboon in aad barato Finnishka ama Iswidishka haddii aadan ku fekersaneyn xitaa inaad dalka deganaato mudo dheer. Inkastoo afka Ingiriiska Finland ku dhowaad si fiican looga yaqaan, hadana aqoonta afka Finnishka ama Iswidishka ayaa wax badan kaaga faa’iido badan.
Goobaha shaqooyinka intooda badan aqoonta afka Finnishka waa lama huraan. Haddii aad rabto in aad Finland wax ku barato afka Finnishka ama Iswidishka ayaa inta badan loo adeegsadaa waxbarashada. Haddii aad rabto inaad codsato dhalashada Finland waxaa qasab kugu ah inaad codsigaada ku lifaaqdaa shahaado cadeyneysa aqoontaada luuqadaha Finnishka, Iswidishka ama luqada dhegoolayaasha Finland.
Marka aad taqaano luqada waa kuu sahlan tahay in aad ku raaxeysato islamarkaasna la qabsato Finland. Waxaa kuu sahlan in arrimahaada aad ka dhameysato saraakiisha, la socoto wararka, dadka barato iyo in aad saaxiibo hesho.
Aqoonta afka Finnishka ama Iswidishka waxay ku siineysaa fursado badan. Waxay sidoo kale aqoontaasi ka bixineysaa sawir fiican adiga oo ah qof xiiseynaya deegaan ama bee’yad ku cusub.
Bilaabista barashada luqad cusub waa ka sahlan tahay Finland. Sababtoo ah Finland waa dal laba luqadle ah, labada luqadoodna waxaa la baraa xitaa Finnishka. Luqadahan oo sida luqado qalaad loo baranayo waa dhaqan ama caado mudo dheer socotay.
Haddii aad ka fekereyso Finnishka ama Iswidishka midkii aad baran laheyd, marka hore xisaabta ku darso labada luqadood tan looga hadlo meesha aad degan tahay iyo deegaanada ku hareereysan.